Dhacdo la yaab leh oo ka dhacday Mid kamid ah Xarumaha Ciidanka AMISOM ee Muqdisho kadib markii Askari uu mid kale u Dilay Hal Dollar - iftineducation.com
iftineducation.com – Waxaa Mid kamid ah Talisyada Ciidanka AMISOM ee Magaalada Muqdisho ka dhacday arin layaab leh dadkuna aad ula yaabeen kadib markii Askar katirsan kuwa AMISOM gaar ahaan Ugandha uu Askari kale u dilay Hal Dollar lacagta Mareykanka ah .
Sida lagu soo daabacay wargeyka new vision ee ka soo baxa dalka ugandha Dhacdadan ayaa ka dhacday Xarun Ciidan ee AMISOM ku leeyihiin Degmada Yaqshiid halkaas uu Askari Ugandha katirsan mid kale oo Saaxiib ahaayeen ugu dilay Hal Dollar Darteed kadib markii ee ku murmeen lacagtaas.
Askarigii dilka geystay ayaa durba gacanta lagu dhigay iyadoona loo gudbiyay Dalka Ugandha oo hada lagu maxkamadeenayo waxaana soo baxaya cadeemo muujinaya Askarigan falka dilka ah geestay in uu Danbiyo kale uu horey u galay.
Askariga Dilka geestay ayaa lagu magacaabaa Stephen Katwesigye waxa uuna Dilay Askariga lagu magacaabi jiray Corporal Erias Mungyeraee ee wada shaqeyn jireen.
Stephen Katwesigye hada Maxkamadiisa kasocoto Magaalada Kampala ee Dalka Ugandha waxa uuna iska diiday eedeemaha loo soo jeediyay iyadoona la sheegay Eedaha Askarigan loo heesto in loo hayo Cadeemo muujinaya.
Xeer ilaaliyaha maxkamadeynta askarigan dilka geystay ayaa codsaday in dib loo dhigo kiiskan oo waqtiga loo dheereeyo, waxaana dib loo dhigay maxkamadeynta askarigaan ilaa shanta bisha soo socota.
Dhacdadan ayaa noqoneysa tii ugu horeysay ee nuucaan ah oo ka dhacda Magaalada Muqdisho ee Askar katirsan AMISOM lacag aad u yar iskugu dilaan iyadoona xusid Mudaantahay in Askarta AMISOM kiiba uu Bishii qaato lacag kabadan Kun Dollarka Mareykanka ah.